Fanapahan-kevitra amin'ny Internet amin'ny Taom-baovao 75 | Martech Zone
Alatsinainy Desambra 20, 2010 Alarobia, Jona 24, 2015 Douglas Karr
Tonga ny fotoana hanaovana korontana amin'ny faran'ny taona. Tamin'ity taona ity dia betsaka ny zavatra nahasosotra anay… tamin'ny fanapahana tsy tapaka ny orinasa goavambe vitsivitsy hatramin'ny fitondrantena media sosialy tsy ekena.
Ireto misy zavatra manadino ahy, ka andao hamboarina izany mba tsy hitranga amin'ny 2011:
Ajanony ny fisintomana. Na dia alaim-panahy tahaka anao aza ianao, alao ny rantsantananao hiala amin'ny CAPS LOCK.
Raha misoratra amin'ny mailakao aho dia aza mandefa a mailaka fanamafisana ho ahy.
Soloy ny sarin'ny atody miaraka amin'ny tena sarinao ao amin'ny Twitter. 3 volana lasa izay ary Tweet 2 sahady.
Aza mandefa nitohy. Aza manao tohiny akory. Efa nanana izahay LinkedIn mandritra ny 8 taona izao, ampiasao.
Raha tsy afaka mifanaraka aminy ianao Karazana 140, mandefasa mailaka amiko.
Raha tsy afaka mamaky ny mailakao amin'ny 2 segondra, Antsoy Aho.
Mametraha hafatra, izaho mailaka miverina ianao.
Oversharing! Be loatra ny fomba hitantsika amin'ny LALANA amin'izao fotoana izao. From Carissa Newton.
Apple: Mamorona efijery izay tsy mila voafafa madio na manomboka mametaka kitendry amin'ny fitaovanao.
Atsaharo ny fandefasana mailaka amiko hatrany hatrany hatrany mandamina fivoriana. Ampiasao ny Tungle!
Aza mampiasa intsony sary taloha amin'ny maha avatar antsika dia samy fantatray fa tsy toa izao intsony ianao. Rehefa mihaona mivantana isika dia mety tsy hahafantatra anao aho na hanontany tena hoe maninona aho no miresaka amin'ny renin'ny mpanaraka ahy. Tsy maninona, matavy sy ratsy tarehy koa aho izao.
Ajanony ny duckface. Isaky ny mahita namana mampiasa azy ianao dia tokony haneso azy imasom-bahoaka. Hisaotra anao izy ireo afaka 2 taona rehefa hitany ny endrik'izy ireo hadalana.
Hey Google… raha tsy tsikaritrareo ny Indostrian'ny SEO no indostria mitombo haingana indrindra amin'ny Marketing. Mety hidika izany fa misy zavatra tsy mety amin'ny algorithm-nao satria mampiasa vola an-tapitrisany ny orinasa hanodikodinana azy. Aza miraharaha azy intsony.
Raha manapa-kevitra ny hanokatra fivarotana ho an'ny geeks ianao, dia alao antoka fa mitahiry tahiry ianao 2XL ka hatramin'ny 5XL lobaka. Tsy azonay ireo vatana ireo tamin'ny P90X, azontsika tamin'ny bilaogy izahay.
Aza atao miditra amin'ny tranokalanao intsony aho Unsubscribe. Izaho sy ianao dia samy mahalala fa very ny teny miafina 4 taona lasa izay rehefa nisoratra anarana. Tsy mbola nitsidika ny tranokalanao aho hatrizay - tsy manampy ny fandefasana mailaka isan-kerinandro.
Misy olona azafady a Fandrarian-dahatsoratra marevaka tonian'ny lahatsoratra mety tsara izany. Raha afaka manampy horonan-tsary ny HTML5, maninona isika no tsy afaka manana mpampanonta teratany?
Atsaharo ny fanoloran-tena an-tserasera hanampy olona iray na hampiroborobo zavatra tsy misy fanarahana. From Amy Stark.
Azafady mba lazao ny fitondram-panjakana, governemanta rehetra, hampiato ny fanandramana hanakorontanana amin'ny Internet. Io no hany zavatra tena miasa intsony - satria tsy nokasihin'ny governemanta izany.
Fantaro fa raha mametraka doka eo alohako ianao miaraka a Skip It rohy, nandiso ilay doka fotsiny aho ary ny famoahana anao.
Aza mijanona milaza amiko ny momba anao iPhone App. Tsy misy miraharaha, manana Droid daholo isika.
Esory nihomehy, Facebook… Mampihoron-koditra fotsiny izany.
Atsaharo ny fanombanana ireo orinasa ao ny an'arivony tapitrisa rehefa taona vitsivitsy izy ireo nefa tsy mahazo tombony akory. Tsy mendrika izany, tsy misy tokony handoa izany. Ary raha manolotra anao ny $ 6 miliara dolara izy ireo, aza adala ary mandà ny tolotra.
Raha tokony ho manakarama olona Raha te hiresaka momba ny halehiben'ny lozisialy misy anao izahay, ataovy izay hahasoa anay rehetra ary amboary ny rindrambaiko voaozona. Nahazo sary mahafinaritra ianao miaraka amin'ilay mpihira mitarika any ambadiky ny sehatra, mbola manandrana miasa izahay manoloana ilay hadisoana momba ny script izay efa teo nandritra ny 4 taona. Tsy rariny.
Nangataka ny zanako vavy mba hajanoko ny maneho hevitra ao amin'ny pejiny Facebook ary mandrahona ireo bandy manandrana mamely azy. Tsy maintsy mieritreritra an'izany aho. Nieritreritra an'izany aho… tsia.
Atsaharo ny orinasa mpitsara ataon'ny tale jeneraliny ao ripped jeans ary satroka koboy, toerana birao milay, fitomboan'ny mpampiasa, na vola VC… efa nanao an'izany izahay tamin'ny taona 90 ary tsy mandeha izany. Manomboha mitsara ny orinasan-tserasera raha tsy ho ela ny mpampiasa dia hitsambikina rehefa tonga ny lehilahy milay amin'ny pataloha jeans rovitra sy satroka Cowboy.
Mandefasa bilaogera toa ahy hatrany kilalao maimaim-poana mba hahafahantsika mihetsika misehoseho, manan-danja ary manohy mamaritra ny tenantsika ho influencers. Tongasoa IPads:
d / o DK New Media
Nisy olona nijanona tsy namaky tamin'ny Internet intsony. Manomboka a podcast ity, manao a Video… Ampiasao mpampita vaovao samy hafa hahatratra ny mpihaino samihafa.
Fikarohana matihanina - aza miteny izany amin'ny rehetra mitsoka ara-tsosialy ary tokony handany ny volany rehetra amin'ny fikarohana izy ireo.
Ireo matihanina amin'ny haino aman-jery sosialy - aza miteny izany amin'ny rehetra mitady hikoty ary tokony handany ny volany amin'ny fiaraha-monina izy ireo.
Manome tanjona telo ny tranokalanao: Fitazonana, fampiakarana ary fahazoana. Adinonao farafaharatsiny ny iray tamin'izy ireo, sa tsy izany?
Ny orinasanao dia manana birao izay avo folo heny noho ny tranokalanao. Tsy nisy nanontany hoe inona ilay fiverenana amin'ny fampiasam-bola handeha eo amin'ny sezalava hoditra, hiala amin'ny fangatahana amin'ny biraonao an-tserasera. Mandany ny vola, jereo ny matihanina, dia hihaino bebe kokoa ianao - Mampanantena aho.
Aza miresaka momba ny firy pageviews mahazo ianao. Ny orinasa dia refesina amin'ny dolara sy cents. Raha tsy mahazo mpanjifa mandoa ianao dia tapaka ny paikadinao.
Atsaharo ny fiezahana ho # 1 ho an'ny teny lakile sarotra indrindra raha misy an-jatony maro teny lakile mifandraika hitondra fiara any amin'ny orinasanao izany.
Aza manandrana intsony laharana iraisam-pirenena raha ny mpanjifanao dia 25 kilaometatra miala ny biraonao. Tsy misy olona any Maui miahy ny amin'ny sakafo atoandro manokana (raha tsy any Maui ianao).
Tsia, ny fampiharana izay hampiasainao dia tsy hahavita izany rehetra izany. Mety tsy hanao izay nolazain'ny mpivarotra akory izy io. Ary ireo fiasa nampanantenaina ao amin'ny famotsorana manaraka? Tsy ho avy koa izy ireo.
Mifikitra amin'izay ahazoanao aina, manakarama mpanolo miaraka amin'ny traikefa voaporofo mba hanampy anao hahafehy ny ambiny.
Mba misy mividy azafady Yahoo! efa ?!
Raha mandefa mailaka amiko ianao ary izaho aza mamaly, azafady aza andefasana ahy tweet, hafatra Facebook, hafatra an-tsoratra ary sokafy amiko ny varavarankely fifampiresahana. Tsy namaly aho satria miasa amin'ny laharam-pahamehana… ary ianao dia tsy mba anisan'ireo (androany).
Facebook mpandrindra… afaka avelanao irery ve ilay interface frunch mandritra ny tapa-bolana. Mba miangavy re?
Maneso ny olona mankany Hooters ianao, fa kosa mividy domains GoDaddy? Marina?
Raha mihoatra ny Version 1 ianao dia tsia beta intsony. Aza miala amin'ny fiezahana hanome ny fialan-tsiny ataon'ireo mpamorona anao tsy manara-penitra.
Ny marketing amin'ny Internet dia tsy tetikasa, tetibola mitaky fikolokoloana, fanatsarana ary fanavaozana hatrany. Ampio amin'ny tetibola 2011 ary ataovy izay ahafahanao mandrefy ny tambin'ny fampiasam-bola.
Angamba ianao tsy mahay fotsiny haino aman-jery sosialy.
Manalavitra ny Flash. Mahafinaritra raha naharitra… avelao ho an'ireo mpanao sariitatra sy mpamorona lalao. Ny zavatra hafa rehetra dia tokony ho HTML5, Ajax, ary CSS. (@jenniedwards nampita lahatsoratra mahafinaritra momba ahy izy HTML mifanohitra amin'ny Flash.)
Aza mitsara ahy firy mpankafy sy mpanaraka Manana aho. Manosika ahy ho voa ianao mitady hanaraka.
Raha misy bilaogera tianao indrindra, izay nanampy anao hanatsara ny asanao nandritra ny taona maro, dia hivoaka miaraka amin'ny boky. Mandehana mividy azy - io no kely indrindra azonao atao. 😉
Moa ve isika rehetra mikasa mafy ny hanatrika? SXSW manao fety nefa very famokarana herinandro?
Raha ianao mpanao gazety mahafinaritra, atsaharo ny fanohananao ny goavanao haino aman-jery ary mivoaha eto ary manaova ny volanao manokana, manorata tatitra ary ataovy izany nefa tsy misy mpampanonta na mpanonta efa tonta mandrovitra ny atiny. Raha nahay izy ireo dia tsy hidina any amin'ny trano fidiovana ny indostrian'izy ireo.
Media sosialy ary mpanolo-tsaina amin'ny marketing amin'ny Internet sa tsy Amish. Raha mahavidy azy ianao dia aloavy izy ireo… raha tsy miverina ianao dia roahy izy ireo. Ny kaopy kafe amidy amin'ny torohevitra tsara dia tsy mandoa hofan-trano.
Fikarohana karazana fikarohana mitaky ambaratongam-tranonkala, famolavolana pejy, fanatsarana ny atiny ary fampiroboroboana ivelan'ny tranonkala. Raha tsy mahazo ireo rehetra ireo ianao dia mbola tsy nanam-pahaizana manokana momba ny SEO.
Raha manao orinasa ianao haino aman-jery sosialy, manome làlana mazava ve ianao handraisan'ny tamba-jotra anao hanao raharaham-barotra miaraka aminao? (ie. Call to Action, Landing Page, Form, sns.)
Justin Bieber: Ny lazainao 15 minitra dia efa 8 volana lasa izay. Mandehana… ary soromy amin'ny fomba mety ny volonao.
Olona iray taonina no mamaky ny tranokalanao amin'ny a Fitaovana finday. Miasa amin'ny finday ve ny tranokalanao? Azo hatsaraina amin'ny iPhone, iPad, Droid ary Blackberry ve izy io?
Raha mbola tsy namorona zavatra ianao dia ajanony haingana ny baolin'ny tsirairay fitsikerana ny zava-bitany.
Atsaharo ny fanaovan'ny mpamorona tranonkala anao ny zavatra rehetra Internet Explorer 6. Tsy vitan'ny hoe manohana navigateur vaky sy tsy azo antoka ianao, mandray anjara amin'ny alikaola sy famonoan-tena ihany koa.
Eny, raha ny marina dia eo aho / ho avy / ho avy be asa.
Aza omena fotoana sarotra amin'ny olona ny mandeha ho azy sy syndication ny atiny. Manana mpiasa 3 sy mpamaky 50,000 XNUMX izy ireo… omeo fotoana kely izy ireo!
Dada, azafady, ajanony ny mandefa ahy mailaka fikomiana ankavanana izay nofoanana 7 taona lasa izay Snope. The NSFW sarin'ireo vehivavy tsara tarehy dia mbola mety ihany. Tiavo ny Zanakao, Doug.
Raha mbola mampiasa ianao popover / popunder varavarankely misy dokam-barotra, fantatray fa kivy ianao ary tsy mahazo vola amin'ny Internet. Mandehana mivarotra telefaona telefaona.
Aza mangataka ahy ho namanao intsony efa-joro sokera rehefa tsy mipetraka amin'ny kontinanta iray ianao ary tsy fantatro ianao.
Google, azafady apetraho an API amin'ny Webmasters hahafahantsika manao manara-maso ny laharanay amin'ny teny lakile rehetra. Izahay dia manao izany amin'ny alàlan'ny fitaovana fantatray fa tsy tianao. Araraoty izany.
Tsy milay intsony ny mamoaka iPhone 4 amin'ny fivoriana. Ankehitriny Droids dia manana fampiharana mitovy ary afaka mamita antso an-tariby tokoa izy ireo. Mila an iPad izao mijery mahafinaritra amin'ny fivoriana atoandro. (Azafady jereo ny # 26)
Twitter, azafady avelao izahay hametraka ny Analytics amin'ny pejinay sy ny anay kaody fanentanana amin'ny rohy miditra mankamin'ny andian-dahatsoratra misy ny serivisinao. Handoa vola an-tanana amin'izany ny orinasa mba hahafahan'izy ireo mandrefy ROI marina amin'ireo rindrambaiko roa sy ireo fanondroana tranonkala avy amin'ny Twitter.
Ho an'ireo mpamorona lozisialy rehetra. Satria saika ny zava-drehetra no afaka autoupdate amin'izao fotoana izao, tsy tokony hidika izany hoe mamoaka kinova vaovao isaky ny 16 ora ianao.
Microsoft: Azafady, sakano ny orinasa rehetra tsy hampiasa Bing na Microsoft.com ary koa ny fonosana fametrahana sy fanavaozana ny vokatra Microsoft rehefa tsy manana ny kinova farany Internet Explorer mihazakazaka. (Ankoatra ny Internet Explorer pejy fanavaozana.)
Mpanamboatra tranokala rehetra: azafady, sakano ireo kinova Internet Explorer rehetra noho ny andiany 8 ary omeo rohy ahafahan'izy ireo misintona Chrome, Firefox, Safari na koa Opera. Ny zavatra rehetra dia fanatsarana.
Apple: Atsaharo ny fikorontanana ary apetaho a fakantsary ao amin'ny iPad sahady. Atsaharo ny varotra fanavaozana ny ronono.
Atsaharo ny fiantsoana olona an-tserasera izay manao asa tsara Kintana Rock. Tsy Kintana Rock izy ireo.
Foursquare: Na inona na inona fomba Gowalla mampiasa mba hahitana ny toerana akaiky indrindra, azafady mangalatra ny hevitra. Marary aho amin'ny fikarohana amin'ny app anao.
Fantatray fa lojika… mandefa mailaka 1 ianao ary mahazo valiny lehibe. Ny fanaovana baomba anay amin'ny alàlan'ny mailaka 26 fanampiny dia tsy hahatonga anao ho in-26 tahan'ny valiny. Mampanantena aho.
Aza miala am-bava fotsiny ny hevitrao momba ny hevitrao momba ny 3 taona ChaCha. Navadintsika ho amin'ny tranonkala mitombo haingana indrindra amin'ny Internet. Plus Scott sy ny ekipany dia tena olona mahay miasa.
Google: Atsaharo ny manome Google Analytics tsy andoavam-bola. Tsy misy mampiasa azy intsony araka ny tokony ho izy, ary nanadino ny fiverenan'ny fampiasam-bola tena izy ianao Analytics afaka manome ny orinasa.
Raha ianao manana hisoratra anarana ho an'ny vondrom-piarahamoninao mba hahazoana fanohanana, avy eo ny fiheverana ny fitomboan'ny fiarahamonina misy anao eo amin'ny varotrao dia manome hafatra mifangaro. Saingy omeo fiakarana ny departemantan'ny marketing anao, tsara izany.
Aza miresaka be loatra momba ny halehibe orinasa sasantsasany manao izany noho ny media sosialy. Tsara be izy ireo talohan'ny media sosialy!
Tsy misy vahaolana mora mpivarotra. Manana mpanelanelana betsaka kokoa izahay, tsy dia misy fotoana, mpanjifa mifidy ary be mpampiasa. Marathon fa tsy haingam-pandeha. Miasà hiasa ary ajanony ny famakiana ity banga ity.
Tags: 2011Fanapahan-kevitra tamin'ny 2011
WordPress Plugin: Lisitra fanamarihana bilaogy
lakilen'ny mpanolotsaina momba ny fahasalamana pc
24 Feb 2011 tamin'ny 10:01 maraina
Eritreritra mahasoa be dia be eto, huh. Fantatro tokoa fa tara ny valinteniko eto fa tiako ho fantatrareo fa nampiala ahy tamin'ity lahatsoratra ity aho ary manome hevitra vaovao marobe hanombohana azy. Fanapahan-kevitra goavana amin'ny Internet tamin'ity taona 2011 ity.